Uyenza njani i-emoji kumfanekiso | Abadali be-Intanethi
Yenza i-avatar okanye i-emojis Ibisoloko ingumsebenzi wokudala apho unokubonisa indalo yakho kwizicelo ezinje ngeWhatsapp okanye kuFacebook, ngakumbi ngexesha lencoko okanye ukuphendula kwizimvo ngesincamathelisi esiqulethe ifoto yethu.
Kule post, siza kusombulula loo mbuzo ubucinga kakhulu, Ndingayenza njani i-avatar okanye i-emoji enomfanekiso? Ke, siza kukubonisa isifundo esincinci sisebenzisa esinye sezona zicelo zidumileyo esele zisetyenziswe ngabasebenzisi abaninzi kwi-Intanethi kwaye siya kukubonisa ezinye onokuthi uzikhuphele kwaye uzame.
1 i emoji
2.1 Inyathelo 1: Thatha ifoto
2.2 Inyathelo 2: Hlela i-avatar
2.3 Inyathelo 3: Izincamathelisi okanye i-emojis
3 Iinkqubo zokwenza i-emojis
3.3 Ubuso cam
Phambi kokuba siqale isifundo, siza kukwazisa kancinci kwingqikelelo ye-emoji kwaye loluphi olu hlobo lwe-emoticon.
Ii-emojis zichaziwe njengoluhlu lweepictograms ezithumela kunye nokunxibelelana imiyalezo ngokusebenzisa amabinzana okanye iingcamango. Oko kukuthi, enkosi kubo siyakwazi ukuchonga isimo sengqondo somntu ngokusetyenziswa okanye ukusebenzisa enye yazo. Okwangoku ziyafumaneka kwizicelo ezininzi kunye neenethiwekhi zentlalo, ngale ndlela kuyenzeka ukuba kutsalwe umdla woluntu kuba bekholisa kakhulu.
I-emoticons inophawu oluphambili lokutshintsha umyalezo womlomo ngokubhala ngendlela ekhawulezayo nelula ukuyiqonda. Yiyo loo nto namhlanje, ziye zaba zizinto ezibalulekileyo zonxibelelwano yaye ziye zanceda abantu abaninzi ukuba banxibelelane. Ngokuqinisekileyo ziyilelwe ukuququzelela ulwimi kwaye ngoku singazifumana zombini kwiinethiwekhi zentlalo nakwikhibhodi yethu ephathwayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba yeyona nto ibalulekileyo ukuqaqambisa njengoko ulwimi lukhona kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye kubalulekile ukuqonda indlela esinxibelelana ngayo.
Ezinye iimpawu zokuqaqambisa kukuba ziluncedo kakhulu ukuba sithetha ngentengiso. Banobudlelwane obuthile kuba bejongwa njengezinto ezicengayo kakhulu, oko kukuthi, okukhona ukongeza i-emojis kwinkcazo yemveliso, kokukhona likhulu inani lotyelelo oya kuba nalo kupapasho. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo i-emoticon ukuba usebenza kwihlabathi leintanethi zentlalo, ukusukela oko zibalulekile ekuqatshelweni kwenkampani okanye iakhawunti ethile. Ke ngoko, ungalibali ukusebenzisa i-emojis kwisicatshulwa kwaye ngokuqinisekileyo inkcazo iya kuba nomdla ngakumbi.
Uyilo kwii-emoticon sisiseko esisisiseko sendalo yazo, nganye kuzo iyilelwe ukuba ibe yinto nje esebenzayo. Xa sithetha ngento esebenzayo sithetha ukuba ziyilelwe injongo ethile, yiyo loo nto njengoko ziyilwe usebenzisa imisebenzi kuzo. Umzekelo, bekungayi kuba yinto enye ukuyila ngobuso obusisikwere ekubeni i-anatomy yethu yahlukile, okanye ngamehlo angaqhelekanga kunye neempumlo. Zaziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezifanayo zonxibelelwano.
Kwesi sifundo, silapha ukuze sithethe nawe malunga nomyili odumileyo weeavatar zeBitmoji kunye nezincamathelisi. Sisicelo esifumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS kwaye ibe yenye yezona zinto zikhutshelweyo kwaye zisetyenziswa ngabasebenzisi kwiminyaka yakutshanje.
Ngaphambi kokuba uqale isifundo, kuya kufuneka uyikhuphele kwiVenkile yakho yePlay okanye iApple Store kwaye uyifake. Nje ukuba uyivule, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukungena, enye yezinto esinazo esi sicelo kukuba isebenza nge-Snapchat kwaye ungangena ukuba sele unayo iakhawunti eqhagamshelweyo ye-Snapchat. Nje ukuba uyidibanise, kuya kufuneka ubonise kuphela isini.
Inyathelo 1: Thatha ifoto
Enye yezinto eya kusicela ukuba siqhubeke nenkqubo kunye nophuhliso lwesicelo, kukuba sisebenzisa ikhamera ukuze iBitmoji ibe nayo. ireferensi encinci yenkangeleko yethu yomzimba kwaye ngaloo ndlela ukwazi ukwenza kamva i-avatar okanye i-emoji.
Umzuzwana kuvela into efanayo njengoko sikubonisa emfanekisweni, iya kukucela ukufikelela okuncinci ukuze ukwazi ukuvula ikhamera ye-smartphone yethu, kufuneka siyinike ukufikelela ukuze siqhubeke nokubamba umfanekiso.
Inyathelo 2: Hlela i-avatar
Umthombo: Android Pro
Nje ukuba sithathe ifoto, isicelo siya kusibonisa imbonakalo yomzimba yeavatar ethile. Us siya kuqhubeka siyihlela ngendlela efana nembonakalo yethu yomzimba. Njengoko ubona, umfanekiso esiwuthathileyo ebusweni bethu kuphela ukukhonza njengesikhokelo kwaye ngoko sikwazi ukuhlela i-avatar yethu.
Kweli candelo ungaqwalasela umbala weenwele, imilo yobuso, amehlo, impumlo okanye nokuphakama kwamashiya.
Inyathelo 3: Izincamathelisi okanye i-emojis
Yintoni ephawuleka kakhulu esi sicelo kukuba nje ukuba siyilwe i-avatar yethu, isicelo sizenza ngokuzenzekelayo uthotho lwezincamathelisi zazo zonke iintlobo, kuxhomekeke kwimeko yengqondo ozifumana ukuyo okanye uvuyisana nemihla yokuzalwa okanye umsitho othile wasekuhlaleni.
Unokusebenzisa ezi zincamathelisi kwincoko kwaye zisebenza njengezincamathelisi ezidumileyo ze-WhatsApp. Zihlekisa kakhulu kwaye zibonelela ngokuchukumisa uvuyo kunye noopopayi ngamaxesha onke. Zama ukuyila i-avatar yakho kwaye uqale ukusebenzisa izincamathelisi.
Iinkqubo zokwenza i-emojis
Sesona sicelo sicetyiswayo ngokuhambelana nabasebenzisi be-intanethi kunye naleyo sikubonise yona ngaphambili kwisifundo sethu. Sisicelo awasiphuhlisayo kwiminyaka ka-2007/2008 malunga kwaye inxulunyaniswe nenethiwekhi yoluntu edumileyo ye-Snapchat. Endaweni yoko, uSnapchat uthathe isigqibo sokuthenga esi sicelo ukuze abasebenzisi abasisebenzisayo babe nee-emojis kunye nezincamathelisi ezinobuso babo kwaye babe ludibaniso lwesicelo ebesikwi-intanethi kwaye sisetyenziswa iminyaka emininzi kangaka. Ngamafutshane, sisicelo esigqibeleleyo ukuba le nto uyifunayo kukonwabisa kwaye kuyonwabisa.
I-Memoji sisicelo seenkwenkwezi esisebenza ngendlela ekhethekileyo. Ewe, ayizinikelanga kuphela ekudaleni i-emojis, kodwa inethuba lokuhlela imifanekiso yakho kudidi lwezakhelo ezinikezelayo. Ngale ndlela ufumana imifanekiso eyonwabisayo neyonwabisayo. Esi sicelo siyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS kwaye ibe yenye yezona zikhutshelweyo kwiinyanga zamva nje. Sisicelo esigqibeleleyo ukuba le nto uyifunayo kukubonelela ngocoselelo olumnandi kunye nobuchule kwimifanekiso yakho kwaye, ngaphezu kwako konke, ukufezekisa iziphumo ezinomdla ngenxa yezixhobo zayo.
Ikhamera yobuso sisicelo esenzelwe kuphela ukwenza ii-avatars kwifomathi ye-3D. Iyafana ne-bitmoji njengoko ivumela ukuhlelwa kunye nokudalwa kwemiba efana nombala weenwele kunye nokumila, umbala wolusu, ukumila kobuso, umbala wamehlo, ukuphakama, isini, njl. Ayinayo nje inxalenye yopopayi yolwandiso lwayo lwe-3D, kodwa nayo kuyenzeka ukwenza iividiyo ezinoopopayi ngeeavatar ozenzileyo. Sisicelo esigqibeleleyo ukuba into oyifunayo ngupopayi kwaye iyonwabisa.
I-FaceQ ibonakaliswe yinkalo yobugcisa ngakumbi, kuba ivumela ukuyilwa kwe-emojis ngendlela yeekhathuni. Ikwanayo nenxalenye yokuhlela kwinkalo yayo yomzimba kwaye ngokungathandabuzekiyo ibe yenye yezona zicelo zisetyenziswa kakhulu ngenxa yojongano lwayo kunye nokuhamba ngokulula. Kwakhona, enkosi kwi-avatar generator yayo ezenzekelayo, unokufumana i-emojis okanye i-avatar ngokucofa nje iqhosha. Sesona sicelo sigqibeleleyo ukuba ufuna iziphumo ezingaphezulu zokuyila kunye nezobugcisa kuba ngokungathandabuzekiyo ithatha ibhaso lolona setyenziso lubalaseleyo lobugcisa kunye noopopayi beejenereyitha ze-emoji.
I-Zepetto sisicelo esikwafana kakhulu neBitmoji, eyona nto ibonakalisa esi sicelo kakhulu kukuba ufuna imvume yekhamera ukuze ukwazi ukuthatha i-selfie kwaye ngale ndlela isicelo sikubonisa i-avatar yakho kwi-3D. Ikwaphawulwe ngenxa yokuba inezimo ezingapheliyo okanye iintshukumo ezinopopayi ezinika i-avatar yakho ukubanjwa kopopayi. Ngokuqinisekileyo, ukuba uyathanda ujongano kunye nendlela esebenza ngayo iBitmoji, uyakuthi mhlawumbi uthandane nesi sicelo silula nesingaqhelekanga. indlela eye yanefashoni ngayo.
Njengoko ukwazile ukuqinisekisa, ukuguqula umfanekiso ube yi-emoji ngumsebenzi olula ukuwuqhuba kuba ngoku sinamawaka kunye namawaka ezixhobo ezibonelela ngalo msebenzi. Siyakumema ukuba uzame ukukhuphela ezinye zezicelo esizicetyisileyo.
Ukongeza, unokuphinda uphande ngakumbi malunga nokudalwa kwee-emoticon, kuba zinebali elinomdla kakhulu emva kwabo, ngakumbi ukuba uzinikele kwihlabathi loyilo lwegraphic kwaye wenze iipictograms. Ngamafutshane, zizinto ezigqibeleleyo ezithi, nangona zincinci, zizalisekise imisebenzi emikhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani i-emoji kumfanekiso